General Discussion / Maamulka Soomaaliland oo Itoobiya u Dhiibay Wiil Lagu Tuhmay ONLF
« Last post by ogadenforum on December 05, 2014, 01:23:02 pm »
Maamul gabaleedka Soomaaliland ayaa bish November 2, 2014, Itoobiya u dhiibay wiil ay ku sheegeen in uu ka tisan yahay ciidamada ONLF. Wiilka waxaa laga qabtay magaalada Hargeysa, mana jirto wax cadayn ah oo qabashada wiilka la geeyey Itoobiya. Sida la sheegay kolkii la keenay Jijiga waa la gatay waana la siidaayey.
General Discussion / Heshiiskii Nabadeed ee DSI, Maxaa isbadalay?
« Last post by ogadenforum on September 09, 2013, 11:10:36 am »
Tan iyo markii uu dhacay heshiiskii Nabada waxaa isbadalay guud ahaan Jawigii colaadeed ee ka jiray degaanka Somalida. Waxaa bilowday mashaariic dhinacyada horumarinta la xidhiidha oo ay ugu badan yihiin dhinaca Jidadka iyo Biyaha.
Waxaa uu isbadal dib u dhac ah uu ku yimid dhinaca ka qayb galka arimaha dawlada wadaaga ah. Waxaa shaqada laga badalay dad badfan oo la shaqayn jiray safaaradaha si ay dadka u tusaan in la wadaago wax walba.
« Last post by Create A Forum on September 09, 2013, 06:48:41 pm »